ब्वाँसो CUB |
नेट मनोरञ्जन तपाईं ल्याउँछ ब्वाँसो CUB. यो थिम्ड जनावरको छ अनलाइन स्लट खेल, यो एउटा मोड को एक बिट संग. अब तपाईं अंदाजा हुन सक्छ रूपमा, खेल एक ब्वाँसो प्याक एक CUB बारेमा छ. जबकि यो CUB प्यारा देखा पर्न सक्छ, यो एक विशाल खानको प्याक सक्छ रूपमा होसियार हुनुपर्छ! तल समीक्षा यो खेलको बारेमा थप जान्न.
रोमाञ्चक अनलाइन स्लट खेल मा ब्वाँसा साथ रहन
यो छ कि अनलाइन स्लट खेल हो 20 स्थिर paylines,3पङ्क्ति र5रील. तपाईं प्ले रूपमा ब्वाँसो प्याक को अल्फा CUB बायाँ कुनामा देखि मा देखिन्छ. पृष्ठभूमिमा रात मा सेट भएको एक हिउँ ढाकिएको वन दृश्य छ. केही Snowflakes पनि भुइँमा बिस्तारै झर्ने साथै देख्न सक्छ
यो खेल कम मूल्य र उच्च-मूल्य प्रतीक दुवै छ. मानक खेल कार्ड एक, जे, K, Q,9र 10 कम-मूल्य प्रतीक गठन. उच्च कदर प्रतीक लागि, तपाईं एक भालु समावेश पशु प्रतीक छ, एक ￼wild बिरालो, एक moose, एक उल्लू र ब्वाँसो CUB.
तपाईं पनि एक पूर्णिमा प्रतिनिधित्व एक ध्रुवीय प्रतिमा छ. एक Snowy ब्वाँसो छापा जंगली प्रतीक प्रतिनिधित्व. जंगली प्रतीक को रील सबै अन्य प्रतीक प्रतिस्थापन गर्नेछ, को स्क्याटर प्रतिमा बाहेक. अन्य प्रतीकहरू स्थानापन्न द्वारा, यो अवतरण विजेता संयोजन को आफ्नो संभावना मजबूत हुनेछ.
यो अनलाइन स्लट खेल फ्री Spins बोनस विशेषता
तपाईंले तीन पूर्णिमा स्क्याटर प्रतीक को एक न्यूनतम भूमि गर्न सक्षम हुँदा ब्वाँसो CUB सक्रिय भएको एक फ्री Spins बोनस सुविधा छ. तिनीहरूलाई तीन स्क्याटर प्रतीक को एक न्यूनतम छ कि ती रील, त्यसपछि स्पिन हुनेछ. यो नि: शुल्क spins एक नम्बर अनावरण भइरहेको नेतृत्व गर्नेछ. तपाईं खोल मुक्त spins संख्या थप्न यदि तपाईं कुल मुक्त spins पुरस्कार इनाम दिनुहुनेछ.
यदि त्यहाँ एक रील मा समान प्रतीक को स्ट्याकहरूको छन् पनि एक ब्लिजार्ड विशेषता सक्रिय गर्न सक्नुहुन्छ. अन्य रील मा, तपाईंले केही अन्य समान प्रतीक देख्न सक्छ. रूपमा रील साथै जंगली प्रतिमा रूपमा यी प्रतीक स्पिन, यो त तपाईं एक विजेता संयोजन कमाउन मेल हुनेछ.
यो एक राम्रो तरिकाले डिजाइन महान ग्राफिक्स र एनिमेसन अनलाइन स्लट खेल हो. ध्वनि उच्च गुणवत्ता र राम्रो गेमप्लेको उत्तिकै योग्य छ. तपाईं एक RTP प्राप्त गर्न सक्छन् 96.34%, तपाईं खम्बा 100 £ तपाईं £ 96,34 को एक भुक्तानी कमाउन भने कि अर्थ.